တခြားကလေးအမေတွေလို မလှဘူးဆိုတဲ့ စကားအပေါ် ဒဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ – Swel Sone News
တခြားကလေးအမေတွေလို မလှဘူးဆိုတဲ့ စကားအပေါ် ဒဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ
ပရိသတ်တွေ ချစ်ကြတဲ့ အဆိုတော် အေသင်ချိုဆွေက single mother တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘဝကို ရဲရဲရင့်ရင့် ဖြတ်သန်းနေတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါပဲ။ အေသင့်ကိုချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကလဲ အေသင်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို အားပေးလက်ခံပြီ ချစ်ခင်အားပေးကြဆဲပါပဲ။ ဒီနေ့မှာတော့ အေသင်ချိုဆွေက ယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ အပြောအဆိုကြောင့် တော်တော်လေး စိတ်ဆိုးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အေသင်ချိုဆွေက “ကျွန်မက ‘ဝ’ တယ်လေ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ? ကျွန်မကရှင့်ခေါင်းပေါ်တက်ထိုင်နေလို့လား? ဟုတ်တယ်…..🤬 သူများကလေးအမေတွေက အပျိုတောင်ရှုံးတယ် လှကြတာ” လို့ လာမယှဉ်နဲ့လေ။”
“အဲ့လိုယှဉ်ပြီး ပြောတာလောက်မုန်းတာမရှိဘူး။ လူတိုင်းမှာ သူ့တန်ဖိုးနဲ့ သူ ရှိပြီးသား။ ယှဉ်စရာကိုအကြောင်းမရှိဘူး။ စေတနာနဲ့လည်း မပြောနဲ့ ကိုယ်လည်းဘာမှလုပ်ပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့။ (ပါးစပ်စေတနာက အပြောမတတ်ရင် ထမှီလှန်ပြသလိုပဲတဲ့နော်။ )”
“ဒီနိုင်ငံမှာ “ဝ” တယ်ဆိုတာနဲ့ ကဲ့ရီစရာ စောက်ခွက်ပြောင်စရာကြီးကိုဖြစ်လို့။ အဲ့ဒီအစွဲတွေကို ချွတ်ပစ်မှာ မပူနဲ့။ ကွယ်ရာမှာ ပြောချင်ပြော $ဂရုမစိုက်ဘူး။ ဒဲ့တော့လာမပြောနဲ့ အာမ မခံနိုင်ဘူး။” ဆိုပြီး ပြောထားပါတယ်။
အေသင်ချိုဆွေလို သည်းခံနားလည်တတ်တဲ့လူတောင် အခုလို တော်တော်လေး စိတ်ဆိုးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
ပန်းခရမ်းရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ကျက်သရေရှိတဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်ပါးလို လှပကျော့ရှင်းနေတဲ့ ပန်းရောင်ခြယ်
ဒီကေန႔ ေမြးေန႔အလွဴအျဖစ္ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆန္၊ ဆီ ႏွင့္ စတုဒီသာ အေအးတို႔ လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ ဆုျမတ္ႏိုးဦး
အောင်လအန်ဆန်ကို အလွယ်တကူအနိုင်ရရန် မဖြစ်နိုင်ဟု ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံ ဘရန်ဒန်ဗီရာပြော
သီတင်းကျွတ်မှာ အဘွားဖြစ်သူကို သောင်းတန်အထပ်လိုက် ပိုက်ဆံပုံကြီးနဲ့ ကန်တော့လိုက်တဲ့ ဇေရဲထက်